Nhau - Nezve isina fodya bbq grill
Kuungana ndiyo nzira yakanakisa yekubatana nekutaurirana neshamwari; iyo barbecue pakuungana inogona kuwedzera ushamwari pakati peumwe neumwe.
Asi kugadzirira kunonetesa kwebarbecue gadziriro inonetesa pasina rubatsiro rwehama neshamwari.
Maitiro ekugutsa aya matanho anonetesa uchigutsa chishuwo chekudya barbecue? MuChina, vechidiki, mhuri neshamwari vachasarudza nzira yakakosha yekugutsa kunakidzwa kwavo pamweya-Pakati pehusiku tudyo (Chikafu chechiChinese chinonzi XiaoYe)
Kazhinji chikafu chakapfava uye chiri nyore chinotora bvunzo yenguva. Kuti ugadzirise kumirira uku kwenguva refu, gasi-anopfungaira utsi grills ave akakurumbira mudiki diki zvitoro.
Grill isina utsi inotora musimboti wekudziya chitofu checeramic pamativi ese kudzikisa njodzi yemoto wakavhurika. Nekuti iyo grill muviri wakanyanya kureba, iyo yakavakirwa-mukati yekuomesa bvudzi inogonesa nzvimbo inopisa kwazvo yezvinopfuura zviviri kuungana pakati kuti iwane Mhedzisiro yekudziya yunifomu. Nekuda kwekuita uku kwekupisa kupisa, chikafu chine hutano uye chinonaka chebarbecue chaunza kudhumhana kwakakosha.
Zvigadzirwa zvehupfu, zvimedu zvehwayana, steaks, oyster, uye zvekudya zvemugungwa zvinogona kugutsa zvese zvinonaka zvinobikwa, hunyanzvi hwekubikisa uye kubonderana kwezvinonhuwira. Kana kuti uku kuchave kuunganidza kwemhuri yako kana bhizinesi remarori, iyo yakaderera mutengo, inokurumidza kuwana mari yemashiripiti mubatsiri.
Zvechokwadi, kuitira kuti zvive nyore kumapoka akasiyana-siyana evanhu, grill yedu isina utsi inogona kusarudza hukuru hwakasiyana, 0.89 mamita, 1.2 mamita, 1.5 mamita, nezvimwewo, iyo yakanyatsokodzera kutengeserana barbecue midziyo. Iyi midziyo yakashandiswa muSoutheast Asia chikafu migwagwa uye Vietnamese cuisines. Mumugwagwa, chero bedzi uchifamba, unovawana. Hupfumi hunokwanisa hwemidziyo iyi hwakakura, huchiita iwe muzvinabhizimusi akanakisa, kutanga kubva panguva ino.
Nguva yekutumira: Nov-05-2021